जवाङ र बादरेभिरमा लेते खस्दा पृथ्वी राजमार्ग अबरुद्ध | Nagarik News - Nepal Republic Media
जवाङ र बादरेभिरमा लेते खस्दा पृथ्वी राजमार्ग अबरुद्ध
अविरल बर्षाका कारण पृथ्वी राजमार्ग अबरुद्ध भएको छ। बुधबारदेखि परेको बर्षाले धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका वडा न १० जवाङ र बादरेभिरमा लेते खस्दा राजमार्ग अबरुद्ध भएको हो।
अबरुद्ध राजमार्ग एकतर्फी संचालन गर्ने प्रयास भैरहेको धादिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक रुपक खड्काले जानकारी दिए।
अबिरल बर्षाले राजमार्गका साथै ग्रामीण सडकहरु पनि अबरुद्ध बनाएको छ। ठाउँ ठाउँमा सडक भासिएको छ।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७७ ०८:२३ बिहीबार
अविरल बर्षा पृथ्वी राजमार्ग अबरुद्ध
दौडसँगै सरसफाइ अभियान ‘प्लगिङ’
स्विडिस भाषाको ‘प्लोका अप’ शब्दबाट ‘प्लगिङ’ नामाकरण गरिएको हो। ‘प्लोका अप’को अर्थ टिप्नु हो। फिल्ड म्याग नामक वेबसाइटका अनुसार यो शब्दको नामाकरणको श्रेय धावक तथा सोलोमन कम्युनिटी मेनेजर इरिक अल्स्सट्रोमलाई जान्छ। उनले स्टकहोममा दौड्ने क्रममा बाटोमा देखिएका फोहोरमैला संकलन गर्छन्।
समयले हजुरलाई पनि बाँकी राखेन नि मुखिया बा! हजुरको त्यत्रो पहुँच, शान, मान र औकात खोई त? जाबो एउटा भाइरसले हजुरलाई त आफ्नै परिवारबाट पो परित्यक्त र सबैबाट उपेक्षित पो बनाएछ त। मान्छे–मान्छेमा विभेदको खाडल खन्ने हजुरजस्ता थुप्रै मुखिया ‘महाअछुत’ भएछन् नि यतिबेला!
म यो संसारबाट उम्किदा नरुनु आमा,
म यो संसारबाट उम्किदा नरुनु आमा,चितामा मेरो दागबत्ती दिदा नरुनु आमा। एउटा दियो बालिदिनु फोटोको अघि, साथीहरूले मेरो नाम लिंदा नरुनु आमा।